ị bụ ebe a: Home Atụmatụ Olee otú iji ngwa ngwa iru mbọ?
The ukwu ga-enwe na eru ọkachamara na mara, otú na-elekọta na mbọ, na ịmata, Gịnị dị mkpa Care of aka ma mbọ ahịa. Eru ọrụ nwere ike isi ike na-emeso ntu efere, nke ga-eduga ekpepụsị jel. Akwadebe aka ma mbọ - a dị nnọọ mkpa nzọụkwụ ụlọ. Na ọ bụrụ nwere ike ghara etinye on n'aka ude tupu usoro. Nke a pụrụ iduga, na sịntetik ihe onwunwe na-agụghị oké mmasị ka ntu efere. Echefukwala ilebara mbọ na cuticle. Iji a pụrụ iche brushes hichaa ngafe unyi na ájá.
Ike rụrụ site Atụmatụ ma ọ bụ iche. Onye ọ bụla n'ihi na ya onwe-ahọrọ kwesịrị ekwesị nhọrọ. The forms bụ nnọọ inogide silicone, ha ga-eji ọtụtụ ugboro. Для этого необходимо иметь небольшую длину собственных ногтей, чтобы форму можно было зацепить под свободный край ногтевой пластины. Затем можно наносить первый шар геля, осторожно растягивая его в разные стороны. Каждый слой геля, а всего их должно быть 3, необходимо сушить под ультрафиолетовой лампой. Это способствует скорейшему высыханию и защищает ногти от грибковых инфекций.
Kpọmkwem otu technology abịa acrylic ntu. N'ihe banyere ARO, mkpa ka ị na-eme nke ọma. n'ihi na a mmalite, dị mkpa na a pụrụ iche mama idozi Atụmatụ. Ọ bụ uru na-arịba ama, na tupu usoro, ọ na-achọsi ike iji chọpụta n'ọdịnihu ogologo ntu. Anyị ike adịghị ike ikwu gluing ozugbo nnọọ ogologo Atụmatụ, mma na-agbazi ha site na iji ntu file. mgbe ahụ, etinyere elu nke jel ma ọ bụ acrylic.
Ọ bụ ezie na sịntetik ihe na nwere onye wetara na pungent isi, na-ọsọ na-asa aka gị ozugbo. tara ahụhụ. A obere ka e mesịrị,, mgbe ihe kpamkpam siri ike, -Asa aka gị na-eme a na-edozi ude.
Olee otú ngwa ngwa ramp elu gị mbọ ugbu a doro anya. Ọ na-anọgide na-na-akọwa, ihe ị na-ahọrọ - a jel ma ọ bụ acrylic? na, na ndị ọzọ na stof na-eme ka mbọ mgbanwe, na-ike. Jel mbọ inye a doro anya na-egbu maramara. Modern Masters mụtara ikpokọta acrylic na jel ọnụ. Ugbu a, ị nwere ike nweta ihe a na izu okè. N'ihi na ike na ike mbụ oyi akwa na-etinyere acrylic, maka gloss na nghọta, n'elu ya, jel.
Ihe ọ bụla aka wuru mbọ, Ha na-achọ elekọta. Echefukwala zere ọkụkụ ike na ihe siri ike n'elu. Nke a pụrụ iduga, na ntu na-adọbi ma ọ bụ ịgbawa. Ọ bụrụ na ndị acrylic nwekwara ike ịgbanwe, jel ga kpamkpam wepụrụ na-anọchi na a ọhụrụ otu.
Ntu extensions - a pụtara dị mfe, ma n'otu oge agwụ na-ewe oge ọrụ, ka a kpọmkwem nkà na ahụmahụ. Nke a ga-enyere ike zuru okè quality ma mbọ, onye ga-obi ụtọ ị na ya mara mma ma na-arapara ekiri anya. Na ná ndụ kwa ụbọchị wuru ihe anaghị eme ka ọ bụla nsogbu.